Norvezy - Fanjakan ny fjords - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Norvezy - Fanjakan ny fjords
Fihaonana ny vondrona ao amin'ny seranan-tsambo (Terminal)
enina ambin'ny folovalo ambin'ny folo. Ny fialàn'ny baka Stockholm. Ny fialam-boly eo amin'ny baka (live music, karaoke, mampiseho, disco). Tonga ao Stockholm. Mizotra mankany amin'ny angano Norvezy, izay majestic tendrombohitra ahinjiro eo amin'ny mangina fjords. Ny voalohany dia nahafantatra ny renivohitra: ny Lapam-panjakana, ny Lapan'ny tanàna, ny Oniversite, ny national gallery, ara-Tantara tranom-Bakoka. Tsidiho ny tsy manam-paharoa Vigeland sary sokitra Park, izay manolotra ny roa amby roa-polo goavana ny asa lehibe indrindra sokitra Gustav Vigeland ny Norvezy.
Nandritra ny alina tao amin'ny sambo (-x toerana
Ny fitohizan ny diany. Nandritra ny alina tao amin'ny trano fandraisam-bahiny. Tohizo ny lalana amin'ny alalan'ny ny zavatra tsara tarehy tendrombohitra. Teny an-dalana ny fjords dia mijanona ao an-tanàna ny Burgundians, malaza tamin'ny Moyen âge hazo Fiangonana, izay manana mihoatra ny fito-polo taona. Bebe kokoa, isika dia manolotra mampientam-po.-ora ranomasina voyage - ny tena tsara tarehy sy lava indrindra fjord any Eoropa (extra-poana). Manohy ny riandrano tsara tarehy. Nandritra ny alina amin'ny farihy trano fandraisam-bahiny ao vasse. Ao amin'ny hariva mandeha maka aina sy voahodidina tsara toetra. Bergen dia tanàna tsy manam-paharoa, ny renivohitra ny anarana fjords ary voahodidina fito-tendrombohitra.
Ny maritrano taloha dia mampahatsiahy ny lasa ny Hanseatic tanànan'ny Bergen, izay mihoatra noho ny taona.
Ny maimaim-poana fotoana, ny fahafahana mandeha amin'ny hazo Bryggen ao Bergen, tia matsiro Atlantika trondro eny an-tsena Fiske varotra, mba handray ny fløibanen funicular ny tendrombohitra haavo roapolo metatra (fanampiny-poana), miaraka amin'ny mahatalanjona ny fahitana ny moyen âge ny tanàna, ny fjords sy ny ranomasina. Ny fitohizan ny diany. Teny an-dalana hijanona any ny olo-malaza riandrano amin'ny haavon'ny amby enim-polo M. ny lalana amin'ny alalan'ny lainga ny tundra, dia mananika ny serpentine ny hahavony metatra ambonin'ny haavon'ny ranomasina, izay na dia amin'ny volana jolay dia afaka mahita ny oram-panala.
Nandritra ny alina tao amin'ny trano fandraisam-bahiny ao Geilo.
Nitohy ny traikefa miaraka amin'ny loko ny Norvezy. Mandeha ny fitetezam-paritra tao an-tanàna: ny malaza taloha harbour, Hackerbruke feno galeries, tsara ny fivarotana sy ny trano fisakafoanana, ny teo aloha-ponenana 'ny mpanjakan' Akershus. Fotoana malalaka. Angamba mitsidika ny tranom-Bakoka ao Oslo isafidianana: 'Kon-Tiki' -fanoloran-tena fampirantiana atao rehefa tapitra ny efa-polo-x ranomasimbe expedition, tarihin'ny iray amin'ireo malaza indrindra norvejiana Thor Heyerdahl, na ny tranom-Bakoka ny Viking sambo, aiza ny fahiny-Pianakaviana fanaka.
Nandritra ny alina tao amin'ny trano fandraisam-bahiny ao Soeda.
Ny fitohizan ny diany any Soeda.
التواصل مع الفتيات
adult Dating sary video Chatroulette video hiresaka tsy misy video hihaona tsy misy fisoratana anarana mba hitsena anao amin'ny fifandraisana Chatroulette maimaim-poana mifanena mandritra ny fotoana iray- adult Dating lahatsary ny ankizivavy ny lahatsary amin'ny chat fisoratana anarana maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat free